‘अन्य दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको’ भन्ने ओलीको बोली भँडुवा र अपराधी बोली हो
काठमाडौं । लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अरु दललाई फुटाउन अध्यादेश ल्याएको हुँ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्रीको बोली नभएर भडुँवा, गुण्डा, दलाल र अपराधीको बोली भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दल विभाजन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
बैठकमा उनले पटक पटक अरु दललाई फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका थिए ।
संग्रौलाले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति लोकतन्त्रका प्रधानमन्त्रीको होइन, भँडुवा, गुण्डा, दलाल र अपराधीको बोली भएको ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री जुनसुकै दलको भए पनि एक प्रकारले सबै दलको अभिभावक पनि रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओली केवल भँडुवा र अपराधी भएको संग्रौलाको जिकिर छ ।
उनले लेखेका छन्, ‘ऊ चाहे जुनसुकै दलको किन नहोस्, प्रधानमन्त्री एक प्रकारले अन्य दलको पनि अभिभावक हो । प्रम ओलीले अन्य दललाई फुटाउन विधेयक ल्याएको हुँ भनेछन् । यो लोकतन्त्रका प्रधानमन्त्रीको होइन, भँडुवा, गुण्डा, दलाल, अपराधीको बोली हो ।’
ऊ चाहे जुनसुकै दलकाे किन नहाेस्,प्रधानमन्त्री एक प्रकारले अन्य दलकाे पनि अभिभावक हाे। प्रम अाेलीले अन्य दललाई फुटाउन विधेयक ल्याएकाे हुँ भनेछन्। याे लाेकतन्त्रका प्रधानमन्त्रीकाे हाेइन,भँडुवा,गुण्डा,दलाल,अपराधीकाे बाेली हाे। जगत् कान थापेर सुनाेस् अाेली सर चिनिने अस्सली बाेली!
— Khagendra Sangroula (@belakoboli) April 21, 2020
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको बोली उनलाई चिनाउने असली बोली भएको बताएका छन् ।
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न खोजे आफ्नै नेतृत्वमा पूर्व नेकपा एमाले पार्टी गठन गरेर भए पनि सत्ता नछोड्ने मनसायका साथ अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गरिएको छ ।
यसले नेकपाभित्र ठूलो हलचल र शंका उब्जाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद तथा पार्टीको बैठकमा भने समाजवादी पार्टी र राजपालाई फुटाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने जसरी समाजवादी र राजपा फुट्न सहज छैन । समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपाका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरुलाई अब पार्टी एकता गर्ने बलियो अवसर प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बाबुरामले भने- खगेन्द्र संग्रौलाजस्ता व्यक्ति समेत कागको पछि दौडने देशमा के अपेक्षा गर्नु?
‘कोरोनाको उपचार औषधि सबथाेक आफै गर्नपर्ने भए सरकार किन चाहियो ? कर किन तिर्नुपर्ने ?’
४ लाख नगदसहित खगेन्द्र संग्रौलालाई पहिचान सम्मान प्रदान गरिने